Aerosol, ireo sombintsombiny mankasitraka ny vokatry ny trano fonenana | Fanavaozana maintso
Aerosol, ireo sombintsombiny mankasitraka ny vokatry ny entona
ny aerosol tsifotra sombintsombiny kely eo amin'ny habakabaka izy ireo. Izy ireo dia tompon'andraikitra amin'ny famoronana rahona ary, miaraka amin'izay koa, mandray anjara amin'ny vokatra entona sy ny manafanafana toetr'andro.
ny aerosol tsifotra eo amin'ny atmosfera no misy azy ireo. Izy ireo dia mety ho avy amin'ny doro ala na ny fipoahan'ny volkano, ohatra, nefa koa avy amin'ny fandoroan'ny solika fôsily. Na avy amin'olombelona na avy amin'ny natiora ireo, ireo sombin-javatra tsara ireo, ankoatry ny hafa, dia afaka mampiroborobo ny vokatry ny lavaka ao amin'ny sosona ozone.
Izy ireo dia manana anjara toerana amin'ny famoronana rahona, manova ny endrik'izy ireo na ny toetrany ary avy eo mandray anjara amin'ny vokatry ny trano fonenana, betsaka na mihoatra ny CO. Calypso, zanabolana an'ny Cnes, dia nandinika azy ireo nandritra ny 9 taona tamin'ny fanantenana hahatakatra tsara ny fiantraikan'izy ireo. Ity fitaovana ity dia afaka mandrefy tsara ny toetra mampiavaka ny sosona samihafa an'ny rivotra iainana.
Ny Cnes dia orinasa ampahibemaso miadidy ny fanolorana sy fitantanana ny politikan'ny habakabaka frantsay any Eropa. Noforonina tamin'ny 1961, ny Cnes mamorona ny rafitra zanabolana sy mpandefa ny rahampitso izay mamaly ny filan'ny fiarahamonina. Cnes dia mitana andraikitra lehibe amin'ny sehatra toerana n-pirenena, Eoropeana sy iraisam-pirenena dia hery manosika, fanavaozana ho tombontsoan'ny asa, ary ivon'ny specialization teknika. Miaraka amin'ny fifandraisana maharitra miaraka amin'ireo herim-bahoaka sy ireo vondrom-piarahamonina siantifika sy indostrialy dia manomana sy manatanteraka izany izy fandaharana toerana manavao.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Fanavaozana maintso » Tontolo_iainana » Sambory co2 » Aerosol, ireo sombintsombiny mankasitraka ny vokatry ny entona
Schlierberg, faritra alemà izay misy angovo 4 heny betsaka noho ny lany
Tigra 100 ihany no mijanona ao amin'ny honahona honko Sundarbans